खानका लागि कुन तेल ठीक ? – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/खानका लागि कुन तेल ठीक ?
मलाई धेरैले एउटा साझा प्रश्न सोध्ने गर्छन्– ‘कुन खानेतेल स्वास्थ्यका लागि ठीक होला ? ’ धेरै मानिस तेल, घिउ, बोसोलगायतका चिल्लो खाद्यपदार्थ र कोलेस्ट्रोलका बारे भ्रममा परेका देखिन्छन् । गृहिणीहरुलाई भान्सामा दिनदिनै खाना पकाउन कुन तेल प्रयोग गर्नुपर्ला भन्नेबारे खासै ज्ञान छैन । धेरैजसोले कतै सुनेको भरमा सूर्यमुखीको तेल प्रयोग गरेको देखिन्छ । किन सूर्यमुखी तेल प्रयोग गरेको भनी सोध्दा ‘यसमा कोलेस्ट्रोल हुँदैन, यस कारण मुटुलाई फाइदा गर्छ’ भन्ने जवाफ दिन्छन् ।
तेलको गुण–दोषको कुरा गर्दा हेर्नुपर्ने चौथो महत्वपूर्ण पक्ष हो यसको शुद्धता । शुद्ध तेल र प्रशोधित तेलमा धेरै फरक छ । बजारमा आकर्षक बोतलमा बेच्न राखिएका धेरैजसो तेलहरु प्रशोधित हुन् । शुद्ध तेलमा कुनै पनि रसायन मिसाइएको हुँदैन ।प्रशोधितमा रसायनहरु मिसाइएको हुन्छ र यसमा ओमेगा–६ को मात्रा बढी हुन्छ । जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । कुनै पनि प्रशोधित तेलभन्दा शुद्ध अप्रशोधित तेल उत्तम हुन्छ । तोरीको तेल सबै दृष्टिकोणले राम्रो देखिए तापनि यसमा भएको ‘एरोसिक एसिड’ नामक फ्याटी एसिडले पेट गडबड गराउने र बालबालिकाका लागि केही हानिकारक मानिन्छ । यसकारण यो युरोप र अमेरिकामा खाँदैनन् ।
पोखराको सराङकोटमा घरभित्र महिला मृत अवस्थामा फेला
बलिउड नायक अक्षय कुमारकी आमा अरुणा भाटियाको ७७ बर्षको उमेरमा नि’धन भएको छ ।